OweGenerations ulandisa ngokubuhlungu bokudlula kwendodana | News24
OweGenerations ulandisa ngokubuhlungu bokudlula kwendodana
Johannesburg - Umlingisi u-Ivy Nkutha odlala indawo kaGogo uFlo kuGenerations:The Legacy ku-SABC1 usivulele isifuba ngokudlula kwendodana yakhe, wadalula nokuthi wazizwa elahlekile, esele nemibuzo eminingi.
Ngesikhathi exoxa nabephephabhuku iMove u-Ivy uthe indodana yakhe ibulawe yisifo senyumoniya, ngemuva kokutholwa nesifo samaphaphu. Udalule ukuthi wazizwa elahlekile wasala nemibuzo eminingi ngenxa yokwamehlela.
OLUNYE UDABA: Uthatha ikhefu kwezokulingisa oweGenerations
"Nginamadodakazi amabili nendodana. Ngenshwa ngashonelwa yindodana yami," usho kanje etshela leliphephabhuku.
"Wathathwa yinomoniya futhi yamsheshisa."
UGogo uFlo uphinde wakhuluma ngobuhlungu bokubuka amadodakazi akhe ebhekene nesimo esinzima sokudlula komfowabo.
U-Ivy Nkutha usevele emidlalweni emibalwa yakumabonakude okubalwa kuyo i-Soul City, iMuvhango, Isidingo, yiCity Ses'La neZabalaza, kubika iTMG Entertainment.